Umbutho oketule umbuso uzoqhubeka ubhekele ukuthula eSudan - Bayede News
Isikhulu se-United Nations (UN) sidingide izindlela zokuxoxisana kanye nezinyathelo ezingase zithathwe eSudan noNdunankulu wayo oxoshiwe ngeSonto, ngemuva kosuku amakhulu ezinkulungwane zababhikishi bebhikishe emigwaqweni befuna kuqedwe ukubusa kombutho wezempi.
Ukuqubuka kokungezwani kube inselelo enkulu kuGeneral u-Abdel Fattah al-Burhan selokhu aketula iKhabhinethi kaNdunankulu u-Abdalla Hamdok ngoMsombuluko odlule wabopha osopolitiki ababalulekile. Imigwaqo ibithule kakhulu ngeSonto.
“Sixoxile ngezinketho zokulamula kanye nendlela eya phambili eSudan. Ngizoqhubeka nale mizamo nabanye ababambe iqhaza baseSudan,” kusho uVolker Perthes, omele i-UN Special Representative eSudan, ebhale kuTwitter. UPerthes uthe uHamdok, “Usemzini wakhe lapho ehlala khona kodwa uboshelwe endlini”.
Imizamo yokulamula yomphakathi wamazwe omhlaba kanye nangaphakathi kweSudan yayisimenyezelwe ngaphambi kwemibhikisho yangoMgqibelo, kungakabikelwa miphumela. Ukuvumelana okukhulu okudingidwayo, bathi osopolitiki abethulile, kuyisiphakamiso sokuthi uHamdok anikezwe amandla aphelele okuphatha futhi aqoke ikhabhinethi yochwepheshe.
Lesi siphakamiso, imithombo ethi sesethulwe kuzo zonke izinhlangothi, sizoqeda iSigungu SoBukhosi esinamalungu ali-14, sivune umkhandlu wokuhlonipha abantu abathathu. Amaqembu ezombusazwe, amaqembu amavukelambuso, namasosha, ababambisene noHulumeni owandulela ukuketulwa umbuso, bazomelwa ePhalamende, kanti amasosha azoqhubeka nokuhola uMkhandlu Wezokuphepha Nezokuvikela.
UHamdok usecele ukuthi kudedelwe iziboshwa futhi kubuyiselwe emuva ohlelweni lokwabiwa kwamandla ngaphambi kokuketula umbuso ngaphambi kokuqhubeka nokuxoxisana, kusho imithombo esondelene naye ngesonto eledlule. Lokhu kuketulwa umbuso kwenzeka eminyakeni emibili nohhafu ngemuva kokuvukela umbuso okwasusa u-Omar al-Bashir, owayebusa iSudan, izwe lesithathu ngobukhulu e-Afrika, iminyaka engamashumi amathathu.
ICentral Committee of Sudanese Doctors ithe ababhikishi abathathu badutshulwe babulawa ngamasosha edolobha laseKhartoum i-Omdurman ngoMgqibelo. Amaphoyisa aseSudan aphikile ukuthi adubule ababhikishi ngesikhathi kuqhubeka imibhikisho, athi kuthelevishini yombuso iphoyisa elilodwa elidubulekile.
Ngokushona kwangoMgqibelo, okungenani bali-15 ababhikishi ababulewe ngesikhathi kungqubuzana nabezokuphepha kusho isikhulu soMnyango Wezempilo. Babalelwa ema-245 abantu abalimele ngoMgqibelo, kusho lesi sikhulu. Impilo ime nse enhlokodolobha iKhartoum ngeSonto. Izakhamizi zithe iziteleka nezokuphepha yikho okudala izinxushunxushu.
Amabhange nezimakethe eziningi kwavalwa, kwavulwa izitolo ezincane ezimbalwa kuphela bezivuliwe.
“Awukwazi ukwenza lutho – konke kuvaliwe. Kudingeka sisebenze nsuku zonke ukuze senze imali,” kusho umdayisi wezithelo nemifino enkabeni yedolobha.
Abantu abakwazanga ukuwela eKhartoum besuka e-Omdurman kanye nelinye idolobha elingasenhlokodolobha, iKhartoum North, ngenxa yokuthi abezokuphepha babevale amabhuloho omfula iNayile. Izinyunyana zodokotela, abamabhange, othisha nezinye izinhlaka bebetelekile kusukela ngesonto eledlule kanti bathi bazoqhubeka kuze kube kuhlangatshezwana nezimfuno zabo, kanti amakomiti aphikisayo avale imigoqo ezindaweni ezakhelene nawo kwaba nemibhikisho.
“Siyaqhubeka nokungalaleli umphakathi neziteleka. Siyaqhubeka nokubhikisha komakhelwane,” kusho elinye ilungu lekomiti elicele ukuthi igama lakhe ligodlwe. “Sizokwenza ngendlela evumela abantu ukuthi baphume bayosebenza,” kusho yena.
Izimfuno zisukela ekunikezelweni kwamandla ezakhamuzini ngokugcwele kuye emacaleni obugebengu abhekiswe kubaholi bokuketula umbuso. Inyunyana yabameli baseSudan ikugxekile ukuboshwa kwezishoshovu nabaholi bezepolitiki. Inyunyana “ixwayisa ngokuthi abantu baseSudan baphambi kombutho wezempi ocindezelayo ovula indlela yobumnyama bobushiqela”.
Anathi Mtaka Nov 5, 2021